Ppr Pipe Fitting Mould၊ Pvc Pipe Fitting Mould၊ Upvc Pipe Fitting Mold - Longxin
ကျွန်ုပ်တို့သည် PPR Pipe Fitting Mold အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့သော PPR Tee Pipe Fitting ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီရှိ ကျွမ်းကျင်နည်းပညာအဖွဲ့မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ယုတ္တိတန်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုကာလကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ စက်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းများ ပိုက်နှင့် ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Mou...
Upvc Equal Tee Mold - CPVC 45°El...
110mm Upvc ပိုက်မှို- C...
တရုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသော Upvc Tee Pipe Fitting Mold -...
စျေးနှုန်းချိုသာသော Upvc Reducer Mold - UPVC Yee Tee...
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Longxin မှိုကို 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မူရင်းကုမ္ပဏီကို 2006 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုကို ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ရန် ကတိပြုထားသည်မှာ 15 နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးအတွေ့အကြုံရှိသည်။စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ။မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၊ သောက်သုံးရေပေးဝေရေး၊ ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်းစနစ် အပါအဝင် PVC / CPVC / PPR / PP / HDPE / etc.
PVC ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ပစ္စည်း အပူချိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပလတ်စတစ် ညံ့ဖျင်းမှု နည်းပါးပြီး ဆေးထိုးမှု မလုံလောက်သဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အအေးကွက်ဟု ခေါ်သည်။အောက်ဖော်ပြပါသည် PVC ပိုက်ဆက်ကြောင်းများတွင် အအေးမိခြင်းများကို ဖယ်ရှားနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။အအေးမိခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေခြင်း...
မည်သည့်ပိုက်အမျိုးအစားကိုမဆို အချိန်အကြာကြီး သန့်စင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး PVC ပိုက်လည်း ပါပါသည်။ဒါကြောင့် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးကို ပိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းတွေ ရရှိနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။1. Chemical cleaning : PVC ပိုက်များကို ဓာတုဗေဒ သန့်စင်ရေးတွင် အသုံးပြုရန် ...
အရည်အသွေးမြင့် ပလပ်စတစ်လျှောများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည်။